दशैँमा हलमा लाग्ने चलचित्र : हेर्न जाने हो की ? « Lokpath
२०७६, २२ आश्विन बुधबार ०७:००
दशैँमा हलमा लाग्ने चलचित्र : हेर्न जाने हो की ?
प्रकाशित मिति : २०७६, २२ आश्विन बुधबार ०७:००
काठमाण्डौं । दशैँमा आफ्नो चलचित्र हलमा लगाउन कलाकारहरुको एक प्रकारको होडबाजी नै चल्ने गरेको छ । यहि विषयलाई लिएर कतिपय कलाकारहरुको सम्बन्धमा नै दरार आउने देखिन्छ । २०७६ सालको दशैँमा प्रदर्शनका लागि पनि चलचित्र राटो टीका निधारमा र छ माया छपक्कै टीममा त्यस्तै प्रकारको घटना भएको बताईएको छ ।
अन्त्यमा राटो टीका निधारमाले बाजी मारेर आफ्नो प्रदर्शन मिति असोज १० प्राप्त ग¥यो । र छ माया छपक्कैले दशैँ पछि असोज २४ को मिति पायो । जे होस यि दुवै चलचित्र दशैँ पेरिफरी मै चल्दैछन् ।
असोज १० गतेबाट रातो टीका निधारमा
अशोक शर्मा निदेशित चलचित्र रातो टीका निधारमा साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह र अंकित शर्मा मुख्य भूमिकामा छन् । साथै रविन्द्र झा, नीता ढुंगाना, खुस्बु खड्का, बुद्दि तामाङ, बसुन्धरा भुषाल, शिवहरि पौडेल, जयनन्द लामा, लक्ष्मी गिरी, अरुणा कार्की, राजराम पौडेल, कमला रेग्मीलगायतका कलाकारको चलचित्रमा भूमिका रहेको छ । चलचित्र असोज १० गतेबट प्रदर्शनमा छ ।
असोज १७ गतेबाट काले दाई
चलचित्र ‘काले दाइ’ जातिय विभेदमा आधारित रहेर निमार्ण गरिएको चलचित्र हो । चलचित्रमा इन्द्र रामजाली, अनू पराजुली, शिशिर भण्डारी, सुरेन्द्र केसी, गीता अधिकारी, सारिका अधिकारी, रामचन्द्र अधिकारी, शिवहरि बैरागी, उत्तम केसी लगायतका कलाकारको अभिनय छ ।
असोज २४ गतेबाट छ माया छपक्कै
असोज २४ गतेबाट प्रदर्शनमा आउँने यो चलचित्रले अहिले प्रमोसनलाई व्यापक बनाएको छ । प्रमोसनका लागि तीजमा निकै चर्चा कमाएको दुर्गेश थापाको गीत बीचबीचमाको साहारा यो चलचित्रले लिएको छ । तर यसमा प्रयोग भएका केहि शब्द अहिले बिबादमा तानिएका छन् ।
आमा सरस्वती मुभिज, रोहित अधिकारी फिल्मस् र आईएमईको प्रस्तुतीमा तयार भएको चलचित्रमा रोहित अधिकारीको लगानी छ । चलचित्रका कार्यकारी निर्माता जितु नेपाल र केदार घिमिरे हुन् । दीपेन्द्र लामाको निर्देशनमा बनेको चलचित्रलाई दीपकराज गिरीले लेख्नुभएको हो ।
‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’
दशैँको संघारमा रिलिज भएको चलचित्र ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ पनि अहिले हलहरुमा प्रर्दशन भईरहेको छ । चलचित्रले रिलिजको पहिलो दिन नै १ करोड ४७ लाख कमाएको थियो ।
मीक्षात्मक रुपमा समेत राम्रो प्रतिक्रिया पाएको यो फिल्मलाई रामबाबु गुरुङले निर्देशन गर्नुभएको हो । चलचत्रिमा दयाहाङ राई, उपासना सिंह ठकुरी, कर्मा, विल्सन विक्रम राई, बुद्धि तामाङ, विजय बराल, पुष्कर गुरुङ, माओत्से गुरुङ, रिश्मा गुरुङ लगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् ।
काठमाडौं । मनिलास्थित चिनियाँ दूतावासले कोभिड–१९को अग्रपंक्तिमा कार्यरतहरुमाथि समर्पित गर्दै एक म्युजिक भिडियो